SIGGRAPH 2019 ရှိ Creative စတူဒီယိုများအတွက် Virtual Workstations, Rendering နှင့် Storage Solutions များကိုပြသမည့် AWS Thinkbox | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » AWS Thinkbox SIGGRAPH 2019 မှာကို Creative စတူဒီယိုများအတွက် Virtual Workstation, rendering နှင့်သိုလှောင်မှု Solutions ခင်းကျင်းပြပေးပါရန်
AWS Thinkbox SIGGRAPH 2019 မှာကို Creative စတူဒီယိုများအတွက် Virtual Workstation, rendering နှင့်သိုလှောင်မှု Solutions ခင်းကျင်းပြပေးပါရန်
SIGGRAPH 2019, တဲမှာ #1203, AWS Thinkbox တင်ဆက်မှု, ကို virtual ကို Workstation များနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုစတူဒီယိုပိုမြန် iterate နှင့်ပိုပြီးစီမံကိန်းများအပေါ်ယူကူညီသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်အပါအဝင်မိုဃ်းတိမ်လုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောစတူဒီယို, မီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအနုပညာရှင်တွေကိုစောင့်ဆိုင်းလျော့နည်းအချိန်ဖြုန်းပြီးကတည်းက Cloud ကိုက rendering ပြန်ဆိုခြင်းနှင့်အချိန်ပိုမိုအကြောင်းအရာဖန်တီးခြင်းနှင့်ပြည့်စုံစတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အမေဇုံ elasticity Compute တိမ်တိုက် (အမေဇုံ EC2) Spot ဥပမာအားဖြင့်အသုံးပြုခြင်း, စတူဒီယိုတွင်-Demand စျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကုန်ကျငွေစု 90 အထိမှာအနီး-အဆမဲ့တင်ဆက်မှုစကေးအောင်မြင်ရန်နိုင်ပြီး, အသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်တွေကိုသာပေးဆောင်။
မိုဃ်းတိမ်ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာ AWS Thinkbox စတူဒီယိုအပြည့်အဝဒီဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုပိုက်လိုင်းပတ်ဝိုင်း။ အမေဇုံ EC2 G3 သို့မဟုတ် G4 ဖြစ်ရပ်အပေါ်အပြေးကို virtual စက်ပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းအားဖြင့်, စတူဒီယိုဒေသခံပထဝီကျော်လွန်အခွက်တဆယ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရေကူးကန်ကိုတိုးချဲ့နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို Workstation ထည့်သွင်းစဉ်းစားမဖယ်ရှားနီးပါးမဆိုတစ်ဦးရကာလတိုအပေါ်တည်နေရာသို့မဟုတ်ရေရှည်အခြေခံအခြေစိုက်အနုပညာရှင်ဆီအကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။ အဆိုတော်များလုံလုံခြုံခြုံအမေဇုံ S3 သို့မဟုတ်အမေဇုံ S3 Glacier သုံးပြီးလုံလုံခြုံခြုံသိမ်းဆည်းထားသည့်အကြောင်းအရာများနှင့်, သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ဦးစားပေးအကြောင်းအရာဖန်တီးမှု tools တွေကိုများအတွက်စတူဒီယိုရဲ့လက်ရှိလိုင်စင်တစ်ခုလွှင့်လျှောက်လွှာသုံးပြီးအလုပ်လုပ်ကြသည်။
"AWS နှင့်အတူမိုဃ်းတိမ်၌စတူဒီယိုအကြောင်းအရာဖန်တီးသူတည်ဆောက်အလွယ်တကူစကေး, သူတို့ကိုပိုမိုမြန်ဆန်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုပိုပြီးသို့မဟုတ်ပိုကြီးသောစီမံကိန်းများအပေါ်ကို ယူ. , နောက်ဆုံးမှာမြင့်မားသော caliber အလုပ်ကယ်နှုတ်တော်မူရန်အပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်သယံဇာတ access ကိုပေးစေခြင်းငှါဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်" ဟုခရစ်စဘွန်း, တည်ထောင်သူကပြောပါတယ် ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏, Thinkbox Software များနှင့်ဒါရိုက်တာ, EC2 ။
SIGGRAPH 2019 စဉ်အတွင်း AWS Thinkbox ကိုလည်းမှာအခန်းတစ်ခန်း 31B အတွက်ဇူလိုင်လ 303 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က cloud-အာရုံစူးစိုက်အစည်းအဝေးများတစ်ဦးအပြည့်အဝနေ့ကတင်ပြပါလိမ့်မယ် Los Angeles မြို့ ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ။ အဆိုပါနေ့က AWS Thinkbox နေပြောရမှာမည်ဖြစ်သည် မကြာသေးမီက၏အုပျခြုပျရေးဘုတ်အဖွဲ့မှအမည်ရှိသောသူကျောင်းအုပ်ကြီးကုန်ပစ္စည်း Manager ကို Will မက်ဒေါ်နယ်, အကယ်ဒမီဆော့ဝဲဖောင်ဒေးရှင်းမှ (ASWF) နှင့် အခြားသူတွေအကြားတင်ပြချက်များနှင့် VFX စက်မှုလုပ်ငန်းနို့ Visual Effects ထဲကနေခေါင်းဆောင်များ, Nice ဖိနပ်, Rocket သိပ္ပံ VFX နှင့်သေနတ်များနှင့်အတူထိန်းချုပ်ထားပြား။
AWS Thinkbox cloud-based စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲကိုဆပ်က၎င်း၏နောက်ဆုံးတဆင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအရင်းအမြစ်များကိုဆပ်နှင့်အတူအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုနှင့်ကာတွန်းစတူဒီယိုချိတ်ဆက်ထားသည်။ အခုတော့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း AWS နှင့်အတူပေါင်းစည်း, Thinkbox က၎င်း၏မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုပေါင်းစပ်ထားပြီး AWS ၏ကျယ်ပြန့်ကမ္ဘာ့အရင်းအမြစ်များကိုပွိုအပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့်ကို virtual စက်, တင်ဆက်မှုနှင့်သိုလှောင်မှုပမာဏ run ဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အတူဖန်တီးမှုစတူဒီယိုပေး။
Details နဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုအချိန်ဇယားကဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်: www.awsthinkbox.com/siggraph-2019
, SIGGRAPH 2019 မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတွက် AWS Thinkbox ဖြေရှင်းချက်မြင် AWS တဲသွားရောက် #1203 ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကစိတ်ဝင်စားစတူဒီယိုမှာတိုက်ရိုက် AWS Thinkbox အသင်းရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် [အီးမေးလျ protected].
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, အလည်အပတ် www.awsthinkbox.com/ သို့မဟုတ် Twitter ပေါ်တွင် @thinkboxsoft လိုက်နာပါ။
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် 2019-07-29
ယခင်: ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှု International
နောက်တစ်ခု: OptiTrack SIGGRAPH 2019 မှာနယူးအရိုး solver ဖော်ပြ